कुन समय महिलाहरु पुरुषसँग अत्याधिक आकर्षित हुन्छन ? हेर्नुहोस - Visualnepal
Design & Devlopment by joy
कुन समय महिलाहरु पुरुषसँग अत्याधिक आकर्षित हुन्छन ? हेर्नुहोस
विश्वमा अनौठा अनौठा प्रयोगहरु र अनुसन्धान भैरहेका हुन्छन । यस्तै अनौठो प्रयोग सार्वजनिक भएको छ । महिलाहरु कुन दिन पुरुष सँग संपर्क राख्न खोज्छन ? भनेर गरिएको अनौठो परिक्षणमा यस्तो कुरा सार्बजनीक भएको छ
बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले शनिबारको रात महिलाहरु सबैभन्दा बढी से क्सी हुने गरेको रहस्य बाहिर ल्याएको छ ।
बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर डगको अध्ययन अनुसार धेरै महिला सातामा एकदिन आफूलाई आफ्नो काबु मा राख्न सक्दैन । त्यो दिन भनेको शनिवारको रात हो । अध्ययनका अनुसार महिला आफुलाई ‘सिडक्टिव फिल’ गराउन विभिन्न तरीका अपनाउँने गर्दछन ।
उनीहरू शनिवारको रातलाई विशेष बनाउन तातो पानीले नुहाउने, नयाँ कपडा लगाउने र पुश अप ब्रालगाउन मन पराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सोही रात उनीहरुले राम्रो हेयर स्टाइल र से क्सी स्माइल बढी प्रयोग गर्ने गरेको अध्यनमा भनिएको छ ।
२००० महिलामा गरिएको सर्भेमा आधाभन्दा बढी महिलाले परफ्यूम पनि प्रयोग गर्दछन, जसले आफ्नो पार्टनरलाई प्रभावित पार्न सकियोस् ।
उक्त समयमा महिलाहरुले से स्क्सी लुक पाउन नियमित व्यायाम गर्ने, टाइट फिटिङ कपडा लगाउने, शर्ट स्कट र गहना लगाउनले पनि सर्भेका क्रममा भेटिएका हो । एजेन्सी
Posted in जीवनशैली
कान समातेर उठबस गर्दा हुन्छ यती धेरै फाईदा
यस्ता समस्यामा औषधी समान हुन्छ कफी,जानिराखौ
चुम्बनबाट सर्ने सात रोग, जानिराखौ
तनाब मुक्त भएर जीवन जिउन मन छ ? यहाँ पढ्नुहोस
सूचना विभाग दर्ता नंः ०००/०००-००
+977 79 000000 / 0000000
Design By: Joy